आयोजना एउटा, उद्घाटन दुईटा ! प्रदीप ज्ञवालीमाथि व्यङ्ग्यै व्यङ्ग्य Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
आयोजना एउटा, उद्घाटन दुईटा ! प्रदीप ज्ञवालीमाथि व्यङ्ग्यै व्यङ्ग्य
बुटवलः गुल्मीको रुरु क्षेत्र- ४ बलेटक्सारमा निर्माण भएको 'बलेटक्सार बजार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना'को उद्घाटनको ताम्रपत्र अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
भाइरल हुनुको कारण हो- एउटै आयोजनाको दुई वटा ताम्रपत्र फेला पर्नु। जसमध्ये एउटामा २०७७ फागुन १३ गते नै आयोजनाको उद्घाटन भएको उल्लेख छ। अर्कोमा भने यही पुस २१ गते उद्घाटन भएको उल्लेख छ।
यी दुई ताम्रपत्र सँगै राखेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दुई पटक उद्घाटन भएको आयोजना भन्दै व्यङ्ग्य गर्दै आएका छन्।
दुवै ताम्रपत्रमा उद्घाटन गर्ने नेताको नाममा भने गुल्मी क्षेत्र नं. १का सांसद प्रदीप ज्ञवाली छन्।
फागुन १३को ताम्रपत्रमा ‘माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली छ। २१ पुसको ताम्रपत्रमा ‘पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, गुल्मी १ नं निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवाली’ उल्लेख छ।
ताम्रपत्रमा यस्तो खेलाँची गरिएपछि यतिबेला ज्ञवालीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पूर्वसचिव भीम उपाध्यायदेखि माओवादी, कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले ज्ञवालीलाई ‘आयोजना उद्घाटनका भोका’ भनेर पनि व्यङ्ग्य गरेका छन्।
यी दुई भाइरल तस्बिरबारे उकेराले बुझ्दा भने आयोजना एक पटक मात्र उद्घाटन भएको पाइएको छ। वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र स्थानीय सबैसँग बुझ्दा फागुन १३ गते बलेटक्सारमा कुनै पनि खानेपानी आयोजना उद्घाटन नभएको पाइएको छ।
त्यसो भए यथार्थ के?
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय गुल्मीद्वारा निर्मित आयोजनाको उद्घाटन गर्ने योजना उपभोक्ता समितिले बनायो। मिति तोक्यो- फागुन १३ गते। ताम्रपत्र पनि बन्यो।
त्यो बेला गुल्मी क्षेत्र नं. १का सांसद ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री थिए। तर सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाले तत्कालीन नेकपालाई छुट्याइदियो। एमाले र माओवादी ब्युँतिए।
‘हामीले सबै तयारी गरिसकेका थियौँ। तर पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसलाले दुईटा बनाएपछि माननीय प्रदीपकुमार ज्ञवाली गुल्मी आउने क्रममा पाल्पाबाटै फर्कनु पर्यो्। त्यो बेला कार्यक्रम गर्न सकिएन’, रुरु क्षेत्र गाउँपालिका- ४का वडाध्यक्ष फर्सुराम ज्ञवालीले भने।
त्यसपछि रोकिएको उद्घाटन कार्यक्रम पुस २१ गते ज्ञवालीकै हातबाट भएको उनको बताए।
‘सामाजिक सञ्जालमा मैले पनि दुई तस्बिर देख्दा आश्चर्यमा परेँ। उद्घाटन भएको हिजो २१ गते मात्र हो। तर कसरी पुरानो ताम्रपत्र सामाजिक सञ्जालमा गयो? यसबारे बुझ्दै छु’, उनले भने।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवनारायण ज्ञवालीका अनुसार पुरानो ताम्रपत्रलाई सच्चाउन मिल्छ कि भन्दै पसलमा लगेको र पसलबाटै फोटो खिचेर ‘भाइरल’ बनाइएको हो।
‘परराष्ट्रमन्त्री थियो। अगाडि ‘पूर्व’ थप्न मिल्छ कि भनी पसलमा लगिएको थियो। तर त्यहि बेला फोटो कसैले खिचेछन्’, उनले भने। पुरानो ताम्रपत्रमा केही थप्न नमिलेपछि नयाँ बनाइएको उनले बताए।
०७०/०७१ बाट सुरु भएको बलेटक्सार बजार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना २१ पुसमा उद्घाटन भए पनि गत वर्षबाटै उपभोक्ताले पानी पिउन सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
हाल तीन सय ५९ घरधुरीमा धारा जडान गरिएको छ। तीन करोड ३० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको आयोजनाले पाँच सय घरधुरीमा धारा जडान गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए।
बलेटक्सार क्षेत्रमा पानी नहुँदा डेढ घण्टा हिँडेर खोलाबाट पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो।
अहिले रुरु क्षेत्र वडा नं. ४ विरौटाबाट १२ सय मिटरमाथि डबल लिफ्टबाट पानी ल्याएर लेखगुफामा ट्याङकी बनाइ घर घरमा धारा पुर्याीइएको उनले बताए।
२०७८ पुष २२ गते ११:५५ मा प्रकाशित